China Intelligent Automatic Microwave Digestion Instrument ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မိုက်ခရိုဝေ့အစာခြေဖျက်ခြင်း > MWD50 အလိုအလျောက်အသိဉာဏ်ရှိသောမိုက်ခရိုဝေ့အစာချေဖျက်မှုကိရိယာ > အသိဥာဏ်အလိုအလျောက်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစာချေဖျက်သည့်ကိရိယာ
အသိဥာဏ်ရှိသောအလိုအလျောက်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစာချေဖျက်သည့်ကိရိယာ isapractical microwave chemical reaction equipment, Microwave digestion technology uses the penetration and activation capacity of microwave to heat the reagents and samples in the closed container.
အသိဥာဏ်ရှိသောအလိုအလျောက်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစာချေဖျက်သည့်ကိရိယာ can increase the pressure in the sample preparation container and the reaction temperature, thus greatly improving the reaction rate and shortening the time of sample preparation.
2. အသိဥာဏ်ရှိသောအလိုအလျောက်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစာချေဖျက်သည့်ကိရိယာ Parameter
DIGIPOL- MWD ၅၀
220-240 VAC 50/60Hz 15A ဖြစ်သည်
2450MHz, Dual magnetron စွမ်းအင်မြင့်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထုတ်လွှတ်မှု
၇ လက်မအကျယ် Touch LCD display
ARM chip ကို ZGI operating system ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်
65L ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ် 316L သံမဏိသံမဏိအပေါက်၊ အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်အလွှာပေါင်းများစွာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော PFA Teflon အပေါ်ယံပိုင်း
တုံ့ပြန်မှု tank အားလုံးတွင်အပူချိန်နှင့်မျဉ်းကွေးများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရှာဖွေခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ပြခြင်း
ရှစ်လွှာသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမိမိကိုယ်ကိုထုတ်ပစ်ပေါက်ကွဲနိုင်သောဒဏ်ခံကြားခံဒီဇိုင်း (AUT-relief structure)၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆလုံခြုံမှုကာကွယ်မှု
ဖိအားထိန်းချုပ်စနစ် G-pressure သည်တုံ့ပြန်မှု tank များအားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဖိအားပေးသည်၊ အလိုအလျှောက်ချိန်ညှိခြင်း/မိုက်ခရိုဝေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်အချက်ပေးခြင်းအကွာအဝေး: 0-2000psig
Piezoelectric ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ၊ ထိန်းချုပ်မှုဖိအားအကွာအဝေး: 0-20M Pa (2500 psi)၊ display တိကျမှု± 0.1M Pa
High-precision optical fiber temperature sensor, အပူချိန်တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး: -50-320 ° C, ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှု± 0.1 ° C, display precision ± 1 ° C
ZG အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်အပြည့်အဝတိုင်ကီထောက်လှမ်းခြင်း၊ အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေး: 0-320 âƒ၊ ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှု±0.1â„
Full tank pressure passive protection system ဖြစ်သည်
ထိပ်တန်းလုံခြုံရေးကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာ (လုံခြုံရေး) ဒီဇိုင်းကိုသုံးပါ၊ ဖိအားပမာဏနှင့် ဦး တည်ချက်အလိုအလျောက်ဖိအားသက်သာမှုကိုသုံးပါ
ပြင်ပကွန်ယက် interface (optional)
နမူနာတုံ့ပြန်မှု tank အပြင်ဘက် tank
စွမ်းအားမြင့် corrosion ခံနိုင်ရည်ရှိသော axial flow fan၊ လှိုင်းလေထန်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လေအေးပေးမှု၊ 200 ° C မှ 60 ° C သို့ ၁၅ မိနစ်သာ
၀-၄၀â„ ƒ/ ၁၅-၈၀% RH
စွမ်းအားမြင့်အလွိုင်း turntable ဘက်ပေါင်းစုံဘောင်
တုံ့ပြန်မှု tank ပမာဏ
3. အသိဥာဏ်ရှိသောအလိုအလျောက်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစာချေဖျက်သည့်ကိရိယာ Feature And Application
၄။ စက်မှုမိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုအပေါက်၏စံသတ်မှတ်ချက်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးပြီးအတွင်းဂလိုင်ကိုခိုင်ခံ့သောအက်စစ်၏ရေရှည် corrosion ကိုကာကွယ်ရန် multi-layer PFA (ပြုပြင်ထားသော polytetrafluoroethylene) နှင့်ဖြန်းသည်။
အသိဥာဏ်ရှိသောအလိုအလျောက်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစာချေဖျက်သည့်ကိရိယာ widely used in heavy metal detection, organic pollutants extraction, material synthesis and other fields.
မေး။ ။ မင်းကုမ္ပဏီကလုပ်လာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲအသိဥာဏ်ရှိသောအလိုအလျောက်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အစာချေဖျက်သည့်ကိရိယာ?
A:ဟုတ်တယ်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါတို့က Arablab, PICCTON, Analytica Russia, Lab Africa, Analytica Germany, Analytica Latin America စသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာကျော်ကြားတဲ့ပြပွဲတွေမှာနှစ်စဉ်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြလိမ့်မယ်။
hot Tags:: Intelligent Automatic Microwave Digestion Instrument၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE